Wednesday April 11, 2018 - 11:02:51 in Wararka by Super Admin
Dowladda dabadhilifka Sacuudiga ayaa sare uqaadday maalgelinta ay ku sameynayso duullaanada dowladaha reergalbeedka ay ku qaadeen wadamada caalamka islaamka.
Dhaxal sugaha Aala Sacuud oo booqasho ku jooga magaalada Paris ee wadanka Faransiiska ayaa dhaliilay qaabka uu u socdo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya isagoo dowladaha Afrika ku sifeeyay kuwa baaba' ah oo ka gaabiyay la dagaallanka wax uu ugu yeeray Argagaxisada Soomaaliya oo uu ula jeedo Xarakada Al Shabaab.
Bin Salmaan oo waji ka raadsanayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ballan qaaday in lacag dhan 100 Milyan oo dollar uu ku taageerayo ciidamada shisheeyaha AMISOM ee Soomaaliya ku sugan.
Max'med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Aala Sacuud ayaa bishii lasoo dhaafay waxay booqasho uga billaabay wadanka Mareykanka halkaas oo lacago Balaayiin dollar ah uu ugu yaboohay dowladda Mareykanka.
Bin Salmaan oo dadaal ugu jira calmaaniyaynta Mandiqadda loo bixiyay Bariga dhexe ayaa si aan horay loo arag lacago ugu faraqaya dowladaha reergalbeedka tallaabadaas oo ka caraysiisay muslimiinta caalamka.
Dowladda Sacuudiga ayaa sidaan kale taageero dhan 100 Milyan oo dollar ugu bixisay howlgalka ka dhanka ah Jamaacaadka Jihaadiga ee ka dagaallama wadamada Saaxilka qaaradda Afrika oo Maali iyo Burkina Faaso kamid yihiin.